တော်ရုံတန်ရုံသူတွေ မမွေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အကြီးဆုံး အိမ်မွေးခွေးတွေ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingတော်ရုံတန်ရုံသူတွေ မမွေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အကြီးဆုံး အိမ်မွေးခွေးတွေ
July 29, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ တော်ရုံလူတွေ ဝယ်မမွေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အိမ်မွေးလေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုပြောပြမယ့် ခွေးလေးတွေဟာဆိုရင် ကမ္ဘာအနှံ့က တန်ဖိုးကြီးခွေးလေးတွေကို စာရင်းပြုစုထားတာပါ ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်အိမ်မွေးခွေးလေးတွေက စျေးအကြီးဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
Tibetan Mastiff လို့ ခေါ်တဲ့ အိမ်မွေးခွေး အမျိုးအစားကတော့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ခွေးအဖြစ် စာရင်းဝင်ထားပါတယ် ။ အကြောင်းကတော့ တရုတ်နိုင်ငံက သူဌေးတစ်ဦးဟာ ဇိမ်ခံအိမ်မွေးခွေး ပြပွဲတစ်ခုမှာ “Big Splash” အမည်ရှိတဲ့ အနီရောင် Mastiff အိမ်မွေးခွေး အမျိုးအစားကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ( ၁.၆ ) သန်းနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
“Tibetan Mastiff မျိုးသန့် ခွေးတွေက နောက်ပိုင်းမှာ အတော်လေး ရှားပါးလို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ပန်ဒါ ဝက်ဝံလေးတွေလိုမျိုး နိုင်ငံရဲ့ ရတနာ တစ်ပါးလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒီလို မျိုးကောင်း မျိုးသန့် အရမ်းရှားလို့လည်း Mastiff ခွေးလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးက ကြီးမားတာပါလို့ ” မွေးမြူရေး သမားတစ်ယောက်က ပြောပြထားပါတယ် ။ စျေးကွက်ထဲမှာ ပုံမှန် Mastiff ခွေးလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ( ၁ ) သန်းအောက်ရှိပြီး မျိုးပွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ( ၂၀၀၀ ) ကျသင့်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Akita ခွေးလေးတွေရဲ့ ပုံစံကို တော်တော်များများက Shiba Inus ခွေးလေးတွေနဲ့ ပုံစံချင်းတူတယ်ဆိုပြီး အမြင်မှားလေ့ရှိပါတယ် ။ တစ်ကယ်တမ်းမှာတော့ Akita ခွေးလေးတွေကို သေချာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် Shiba Inus မျိုးစိတ်တွေနဲ့ အတော်များများ ကွဲပြားတာကို သတိထားမိကြမှာပါ ။ ဒါ့အပြင် Akita နဲ့ Shiba Inus မျိုးစိတ်နှစ်ခုကြားက ပုံစံကွဲပြားမှုကို ပိုပြီး ကွဲကွဲပြားပြား သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google နဲ့ Instagram ပေါ်က နာမည်ကြီး အိမ်မွေးခွေးအကြောင်းတင်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ လေ့လာလို့ ရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုပြောပြမယ့် Akita အိမ်မွေးခွေးလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လို့နေပါတယ် ။ Akita ခွေးလေးတွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံက နေ မကြာခဏ နိုင်ငံရပ်ခြားဆီ တင်ပို့ မရောင်းချခင်တည်းက တန်ဖိုးကြီးမြင့်နေတာခဲ့ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ( ၈၀၀ ) ကနေ ( ၃၅၀၀ ) ကြားမှာ ရှိပါတယ် ။ တစ်ချို့ စျေးကွက်ထဲမှာဆိုရင် အရွယ်ရောက်ပြီးသား Akita ခွေးလေးတစ်ကောင်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ( ၇၅၀၀၀ ) အထိတောင် တန်ဖိုးရှိပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
Löwchen လို့ ခေါ်တဲ့ ခွေးအမျိုးအစားလေးကိုတော့ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန် ချစ်သူတွေကြားမှာ “ ခြင်္သေ့ပေါက်စလေး ” လို့ အမည်ပြောင်ပေးကာ ခေါ်လေ့ရှိကြပါတယ် ။ အမွေးရှည်ရှည်လေးနဲ့ ချစ်စရာပုံစံရှိတဲ့ Löwchen ခွေး မျိုးသန့်တစ်ကောင်ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ( ၃၀၀၀ ) ကနေ ( ၈၀၀၀ ) ကြား ကုန်ကျမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Löwchen ခွေးလေးတွေဟာ ( ၁၃ ) ရာစု နဲ့ ( ၁၄ ) ရာစုနှစ်ကြားကာလတွေထဲက နာမည်ကြီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုခေတ်ကတည်းက အိမ်မွေးခွေး မွေးမြူသူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါပေမယ့် ( ၁၉ ) ရာစုနှစ် အရောက်မှာတော့ Löwchen ခွေးလေးတွေဟာ မျိုးတုန်းလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီဘက်ခေတ်မှာ တွေ့မြင်ရဖို့ အတော်လေး ရှားပါးသွားခဲ့ပါတယ် ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Löwchen ခွေးလေးတွေဟာ အမြင်အာရုံ မကောင်းတဲ့ ပြဿနာရှိပြီး တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်နဲ့ သေချာ ပြသ သင့်တယ်လို့ ပိုင်ရှင်တော်တော်များများက အကြံပြုထားကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Irish Wolfhound လို့ ခေါ်တဲ့ ခွေးမျိုးစိတ်ဟာဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကြီး အိမ်မွေးခွေးတွေ ထဲမှာ ပါဝင်လို့နေပါတယ် ။ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ပင် Irish Wolfhound တွေရဲ့ မူလမျိုးရင်း နိုင်ငံကတော့ အိုင်ယာလန် နိုင်ငံက ဖြစ်ပြီး မွေးမြူထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ဝံပုလွေတွေ ရန်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် Irish Wolfhound ခွေးတွေကို မွေးမြူလေ့ရှိကြပါတယ် ။ စျေးကွက်ထဲမှာတော့ Irish Wolfhound ခွေးလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ( ၁၅၀၀ ) ကနေ ( ၂၅၀၀ ) ကြား တန်ကြေးရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုပုံမှာ မြင်ရတာကတော့ နာမည်ကြီး စိန့်ပက်ထရစ်နေ့မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ကိန်းဘရစ်ချ် မြို့စားကတော် ဖြစ်တဲ့ ကိတ် မစ်ဒယ်လ်တန် နဲ့ အတူ တွေ့ရတဲ့ Domhnall အမည်ရှိ Irish Wolfhoundခွေးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီခွေးလေးဟာဆိုရင် အိုင်းရစ် အစောင့်တပ်ရင်းရဲ့ လာဘ်ကောင် ခွေးလေးဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ အခမ်းအနားတွေမှာ လာဘ်ကောင် အဖြစ် လိုက်ပါရတဲ့ ရာထူးကနေ အနားယူခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
The Pharaoh Hound လို့ခေါ်တဲ့ ဒီခွေးမျိုးစိတ်တွေနဲ့ မျိုးစပ်မယ်ဆိုရင် ကျသင့်မယ့် စျေးနှုန်းက တော်တော်လေးကို များလှပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် စျေးကွက်ထဲမှာ ဆိုရင်လည်း The Pharaoh Hound ခွေးလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ( ၂၀၀၀ ) ကနေ ( ၅၀၀၀ ) ကြား တန်ဖိုး ရှိပါတယ်တဲ့ ။ ဒါ့အပြင် ရှေးဟောင်း အီဂျစ် အနုပညာ လက်ရာတွေမှာ The Pharaoh Hound ခွေးလေးတွေကို ဖော်ပြထားခဲ့တာမို့လို့ ဒီခွေးလေးတွေဟာ ရှေးအကျဆုံး ခွေးမျိုးစိတ် စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်လို့ နေပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရတော့ The Pharaoh Hound ခွေးမျိုးစိတ်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၄၀၀၀ ) ဘီစီတည်းက ရှိနေခဲ့တာလို့ ပြောထားကြပါတယ် ။ ရှေးကျတဲ့ ခွေးအမျိူးအစား ဖြစ်တာကြောင့် ဒီခွေးလေးတွေဟာ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ကို တွေ့ရဖို့အတွက် အတော်လေး ရှားပါးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုအခါမှာတော့ The Pharaoh Hound ခွေးမျိုးသန့်တွေကို မော်လ်တာ နိုင်ငံမှာသာ တွေ့ရပါတော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ တော်ရုံလူတွေ ဝယ်မမွေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး အိမ်မွေးခွေလေးတွေထဲက တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com